Kelingking Beach eo Nusa Penida. Bali " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Kelingking Beach eo Nusa Penida. Bali
Kelingking Beach eo Nusa Penida. Bali
Kelingking Beach. Nosy Nusa Penida
Topy maso ny morontsiraka Kelinking ao amin'ny nusa Penida
Kely habe ity morontsiraka ity ary eo anelanelan'ny tandavan-tendrombohitra roa amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny nosy. Nusa Penida, Bali. Mba hahatongavana any Kelingking dia mila midina avy any amin'ny tendrombohitra avo ianao. Na izany aza, ara-drariny izany, satria tena tsara tarehy eto. Kelingking dia manana morontsiraka fasika, rano manga mamiratra, rindrina vato ary ala mikitroka.
Raha tsy misy fihoaram-pefy, ity morontsiraka ity dia azo antsoina hoe iray amin'ireo tsara tarehy indrindra eran'i Indonezia. Kelingking dia voahodidin'ny ala matevina miaraka amin'ny zavamaniry tropikaly. Izy io dia manana endri-javatra maromaro manavaka azy amin'ny morontsiraka maro hafa:
Dimy kely dia kely: ny halavany - tokony ho 100 m, ny sakany - 25 m.
Hazo tropikaly eny amoron-dranomasina, ahafahanao miafina amin'ny hafanana ary manao fitsangantsanganana.
Bibidia hafakely misy karazam-borona, trondro ary bibikely miavaka.
Akaiky ny tendrombohitra - ny tampon'izy ireo dia efa manomboka 20 m avy amin'ny ranomasina.
Ny fatiantoka dia ny tsy fisian'ny mpiambina ary, amin'ny ankapobeny, ny tsy mety amin'ny moron-dranomasina amin'ny filomanosana. Misy koa ny fidinana somary mideza sy ny onja haingana. Tokony hotazominao lavitra ny rano raha tsy tena mahay milomano ianao.
Raha handeha mivantana mankany amin'ny moron'ny morontsiraka ianao dia mila midina avy eny amin'ny hantsana avo iray miaraka amin'ireo dingana somary tsy maninona. Tsy misy fomba hafa.
Nidina tany amoron-dranomasina
Ny tombony voalohany sy lehibe, mazava ho azy, dia ny hakanton'ny morontsiraka sy ny tontolo manodidina azy.
Ny tombony azon'ny Kelingking dia fasika malefaka, onja lehibe, aloka maro ary rivotra madio, ary mangarahara be ny rano.
Ambonin'izany, somary mangina ny torapasika. Amin'ny andro fiasana dia tsy mihoatra ny 40 ny olona matetika no miala sasatra eto indray mandeha. Ny antony lehibe mahatonga an'io dia ny tsy fahazoana miditra amoron-dranomasina.
Keliking Beach dia eo amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny nosy Nusa Penida
adiresy: Kelingking Beach, Steep & rocky 80771, Sompang, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.751605, 115.472875
Morontsiraka Kelinking amin'ny sari-tanin'i Bali
Morontsiraka Kelinking amin'ny sarintany nosy Penusa nosy
Morontsiraka Kelinking amin'ny sarintany nosy satelita
Sarin'ny morontsiraka Kelinking
Morontsiraka Kelinking. Sary drone
Tohatra mankany amin'ny morontsiraka Kelinking
Ny morontsiraka tsara tarehy indrindra any Indonezia
Morontsiraka Kelinking ao amin'ny nosy